Umzi-mveliso weeKristale nonlinear - i-China i-nonlinear crystals abavelisi, abaxhasi
Ii-Waveplates ezinkulu zeAchromatic
I-Gallium phosphide (GaP) i-crystal yinto ebonakalayo ye-infrared enobunzima obuhle bomhlaba, ukuqhuba okuphezulu kwe-thermal kunye nokuhanjiswa kwebhendi ebanzi.
I-Zinc Telluride yinkomfa yeekhemikhali yokubini kunye nefomula yeZnTe.
I-Cr² +: I-ZnSe i-absorbers ezinokuhlanjululwa (SA) zizinto ezifanelekileyo zokutshintshwa kwe-Q-switch ye-fiber ekhuselekileyo yamehlo kunye ne-lasers-state eqinile esebenza kuluhlu lwe-1.5-2.1 μm.
Amakristali e-ZGP aphethe ii-coefficients ezinkulu ezingahambelaniyo (d36 = 75pm / V), uluhlu olubanzi lwe-infrared transpareence (0.75-12μm), ukuqhuba okuphezulu kwe-thermal (0.35W / (cm · K)), umqobo womonakalo omkhulu we-laser (2-5J / cm2) kunye Umatshini wepropathi, iZnGeP2 yikristale yayibizwa ngokuba yinkosi yee-infrared nonlinear crystals optical kwaye iseyeyona nto ingcono yokuguqula izinto kumandla aphezulu, ukuveliswa kwe-laser infrared. Singabonelela ngomgangatho ophezulu wokujonga kunye nobubanzi obukhulu beekristali ze-ZGP ezinokungalingani okuncinci kakhulu α <0.05 cm-1 (kwimpompo ye-wavelengths 2.0-2.1 µm), enokusetyenziselwa ukuvelisa i-laser esembindini ye-infrared ngokulungiswa okuphezulu nge-OPO okanye i-OPA iinkqubo.
IAGS Icacile ukusuka kwi-0.50 ukuya kwi-13.2 µm. Nangona ulungelelwaniso lwayo lwe-nonlinear optical yeyona iphantsi phakathi kweekristal ezikhankanyiweyo, ukuphakama kwamaza amafutshane okubonisa ukukhanya kwi-550 nm kusetyenziswa kwii-OPOs ezityalwe ngu-Nd: YAG laser; kuninzi lokwahluka kokuvavanywa kokuvavanywa kokuvavanywa nge-diode, Ti: Sapphire, Nd: YAG kunye nelaser laser dae egubungela u-3-12 µm; kwiinkqubo zokuchasana ngqo ne-infrared, kunye ne-SHG ye-CO2 laser. I-Thin AgGaS2 (AGS) iipleyiti zekristale ziyaziwa ngokuveliswa kwempembelelo ye-ultrashort kumbindi we-IR ngokwahluka kokuveliswa kwesantya kusetyenziswa ukubonwa kwamaza kwe-NIR.
AGSe Amakristali e-AgGaSe2 anemiphetho yeebhendi kwi-0.73 kunye ne-18 µm. Uluhlu lwayo lokuhambisa olusebenzayo (i-0.9-16 µm) kunye nobubanzi bokuthelekiswa kwesigaba kubonelela ngokubonakalayo kwezicelo ze-OPO xa zimpompozwe ziilas ezahlukeneyo. Ukucwangciswa ngaphakathi kwe-2.5-12 µm kufunyenwe xa kupompa nguHo: YLF laser kwi-2.05 µm; kunye nokusebenza kwesigaba esingabalulekanga (NCPM) ngaphakathi kwe-1.9-5.5 µm xa upompa kwi-1.4-1.55 µm. I-AgGaSe2 (AgGaSe2) ibonakalisiwe njengeyona nto iphindaphindayo iphindwe kabini ngekristale yee-infrared CO2 lasers radiation.